Mogadishu Journal » Somaliland oo sheegtay in aysan cayrin doonin wakiilka jabuuti
Mjournal :-Xukuumadda Somaliland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay in diblomaasiga ujooga Jabuuti Somaliland uu wax dacwad ah uga soo gudbiyay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Ucid Eng.Faysal Cali Waraabe.
Wasiirka Arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon) ayaa ka hadlay xiriirka u dhexeeya Somaliland iyo Jabuuti ugu horeyna isagoo ka jawaabaya waxaa ka jira dacwadan waxa uu yri “Haba yaraate wax dacwad ah oo ka dhan ah Faysal iyo Wakiilka Jabuuti ee Somaliland oo Xukuumad ahaan na soo gaadhay ma jiraan, labada dhinac iyo dhinaca kaleba midna kama hayno wax dacwad ah”.
Wasiirka ayaa sido kale sheegay in Jabuuti iyo Somaliland yihiin laba waddan oo walaalo ah xiriir Qoto dheerina ka dhexeeyo, isagoo meesha ka saaray in ay jirto Cadaawad madaxweyne Geelle, u qabo Somaliland arrintaasi oo hore guddoomiyaha UCID u sheegay.
“Faysal wuu hadlay wuxuu ku hadlayeyna waa la arkaayey, Wakiilku wax dambiya muu galin, sabab dalka aanu uga saarnaana ma jirto, kama saarayno, ee waxaa haboon in dacaayadaha la joojiyo, oo wixii khalad ah la joojiyo, umaddana yaan la khaldin, oo yaan wax kasta la buun-buunin”. ayuu yiri Wasiir Faratoon